Posted by zizawa ⋅ 09/06/2010 ⋅ 41 Comments
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ တာဝန်အရ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြတာမို့ ကျေးဇူးတရားဆိုတာ အပိုတွေ (ဒါမှမဟုတ်) မရှိဘူးဆိုတဲ့ အပြောဟာ ၁၇ ရာစု ၁၈ ရာစုကနေ ကနေ့ထိ တကမ္ဘာလုံးမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ စနစ်တခု တနည်းအားဖြင့် အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့  underlying concept နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်နွယ်နေတယ်။ ဖီလော်ဆော်ဖီမှာ ဒါကို self-ownership လို့သိကြတယ်။ အဲဒိ concept သဘောတရားကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးထားပုံက … the libertarian principle of self-ownership, which says that each person belongs to him/herself and therefore owes no service or product to anyone else တဲ့။
နှစ်ဆယ်ရာစုထဲမှာ ပေါ်လာပြီး အထိုက်အလျှောက် ခေတ်စားခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ် တော်တော်များများဟာ ဒီသဘောတရားနဲ့ မကင်းဘူး။ feminist တွေ၊ နောက် ဘာတဲ့ အိပ်ဇစ်စတယ်ရှင်လစ်ဇင်လို၊ နောက်ဆုံး အရင်းရှင်စနစ်ကို မတရားဘူးလို့ ဝေဖန်တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်တွေကိုယ်တိုင် အရင်းရှင်စနစ်ကို ထောက်ပံ့အားပေးထားတဲ့ ဒီ self-ownership သဘောတရားကို ကိုင်ပြီး အရင်းရှင်စနစ်ကို ဝေဖန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ ခုပြောခဲ့တာတွေဟာ ဗလာချီ ကြွားနေတာ မဟုတ်ပါ။ ဆက်ဖတ်ရင် နောက်ပိုင်းမှာ ခုဘာကြောင့် ဒါတွေပြောနေသလဲဆိုတာ ရှင်းလောက်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဘိုတွေနဲ့ “ဗမာ”တွေ ကွာသွားတာက ဘိုတွေက ….. မင်းကိုငါ မနေ့က ကူညီထားတာလေ သွားပြောရင်တောင် မမှတ်မိဘဲ ဘာတွေ လာကြောင်နေတာလဲ ပြောထည့်လိုက်ဦးမည်။
တကယ်တော့ ဗမာတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။ အာဖရိကမှာလည်း ဒီလို ‘ကျေးဇူး’ သဘောတရား ရှိတယ်။ ကိုလံဘတ်(စ) မရောက်ခင် အမေရိကတိုက်မှာနေတဲ့ ဌာနီ တိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်း ပြောခဲ့တဲ့ ‘ကျေးဇူး’ သဘောတရားရှိတယ်လို့ သူတို့အကြောင်း ရေးတဲ့ သမိုင်းဆရာတွေ အပြောအရသိရတယ်။ တနည်းအားဖြင့် pre-capitalist societies အရင်းရှင်စနစ်ဝင်မလာသေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ ဒီသဘောတရားဟာ အသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိတာတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်းရှင် စနစ်ထဲမှာ လုံးဝအသားကျနေသူတွေကြားမှာ well-socialised products of capitalism ဒီသဘောတရားဟာ ခေတ်မစားတော့ပဲ အာပလာ ဖြစ်သွားတာကို နားလည်လို့ရတယ်။ တဘက်မှာ ဘိုတွေကြားမှာ၊ ဘိုတွေရဲ့ စာတွေနဲ့နီးစပ်မှုရှိသူတွေကြားတင်မက ဂျပန်ပြည်ရော၊ ကနေ့ခေတ် တရုတ်ပြည်လိုနိုင်ငံတွေမှာပါ တနည်းအားဖြင့် အရင်းရှင်စနစ် အသားကျလာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင် pre-capitalist society ကလုပ်ပုံကိုင်ပုံ၊ တွေးပုံခေါ်ပုံကို စိတ်ကုန်သူတွေကြားမှာ ပြောခဲ့တဲ့ Self-ownership သဘောတရားဟာ အားကောင်းနိုင်စရာ ရှိတယ်။
Posted by watote | 09/06/2010, 11:00
Posted by မြတ်နိုး | 09/06/2010, 11:17
အဲဒါဆိုလည်း နားမလည်တဲ့ အတိုင်းပဲ ထားလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ ပြည်တွင်းထဲက မိတ်ဆွေတချို့ ကို ပို့ဖို့ ရေးရာမှာ ဘလော့ပေါ်က လူတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း သိချင်လို့ တင်လိုက်တာပါ။
Posted by zizawa | 09/06/2010, 11:35
ကျနော်က တော့ ကိုအန်ဒီထောက်ပြသွားတဲ့ပို့စ်ကို လုံးဝ လက်ခံတယ်။
Posted by မြတ်နိုး | 09/06/2010, 11:18
prostitution ဟာ တရားလား မတရားဘူးလား
Posted by tint oo | 09/06/2010, 11:40
ko tint, go and read ‘the secret diary ofacall girl’. this isareal life story. she hasaPhD in IT andaproud, self-declared hooker. ITV series is based on her story. try searching belle de jour!! the concept of self-ownership justifies voluntary slavery or prostitution. more later….
Posted by zizawa | 09/06/2010, 11:45
Posted by tint oo | 09/06/2010, 16:04
ko tint, look at this syllogism..
Posted by zizawa | 09/06/2010, 12:03
ခက်တာက ခက်တာပဲ bro.
Posted by Rita | 09/06/2010, 12:21
Posted by watote | 09/06/2010, 12:26
Posted by watote | 09/06/2010, 12:27
ကျုပ် တဘက်ဘက် လိုက်ရေးတဲ့ ပုံမျိုး မရောက်အောင် ရေးပါသည်။ တကယ်လည်း မလိုက်ပါ။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလို ဒီလို တွေးကြသလဲဆိုတာ သိသလိုလိုရှိလို့ ချရေးကြည့်တာပါ။
Posted by watote | 09/06/2010, 12:31
ကွန်မင့်မထားရစ်ခဲ့ပေမယ့် လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝပုံကို အားကျမိပြီး သုံးသပ်ပြပုံကိုလည်း သဘောကျနှစ်ခြိုက်မိပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ | 09/06/2010, 13:17
Thank you, sir. (again) lol……
Posted by zizawa | 09/06/2010, 13:31
Posted by tint oo | 12/06/2010, 08:27
ကိုတင့် ခင်ဗျား မနောက်ပါနဲ့။ crime brings together honest men and concentrates them တဲ့။ Durkheim ရဲ့ crime အမြင်ကို ထပ်ဆင့်ရှင်းထားတဲ့ quote တခု။ wesheme blog မှာ ကိုအင်ဒီရေးတာကို စုပြုံထောက်ခံတာကိုသာကြည့်။ ကျွတ်မုန်းဝင် အဲဒါဆက်ငြင်းရင်ကောင်းမယ်။
Posted by zizawa | 12/06/2010, 08:37
Posted by tint oo | 12/06/2010, 09:08
ကျေးဇူးကိစ္စက ရာဇ၀တ်မှု မမြောက်ပါဘူးဗျာ။ ပြောချင်တာက စာဖတ်သူတွေ အမြင်မှာ သူတို့ရဲ့  collective conscience ကို လာထိပါးခံရတယ် ထင်တယ်။ အဲဒိအထင်နဲ့ စုစည်း မိကြတာပဲ။ ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေကို ဖောက်ဖျက်မှုကို ခေါ်တာလို့ Durkheim ကပြောတာ။ အဲဒါတနည်း မှန်တာပဲ။ ဖောက်ဖျက်တယ် transgress လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမှာကို အဓိပ္ပါယ်က ပါပြီးသား။ ဘာကို ဖောက်ဖျက်တာလဲ??? ဟုတ်တယ်မလား။
Posted by zizawa | 12/06/2010, 09:41
Posted by tint oo | 12/06/2010, 11:27
This isaconcrete theoretical view of society for the given aspect. If you could make more comprehensive enough, I wouldn’t need to read more than twice. 😀 Just kidding. I have read twice and still dont get some parts. Well I will do it again. My standing is just as I wrote and I wont discuss further though. Nice one, indeed.
Posted by Andy Myint | 09/06/2010, 13:47
I don’t have anything to disagree in your post. It’samatter of attitude. Even if we are obliged to or entitled to give/receive certain services, saying ‘thank you form your heart’ isamatter of personal attitude. And of course I would personally say ‘thank you sincerely’ toanice taxi driver (who is not too professional) even after paying for the journey. This isaexchange of service and money, right? But saying thank you is entirely one’s own choice, perhaps reflecting your personal attitude…
Posted by zizawa | 09/06/2010, 13:58
Did you say.. you droppedacomment at my blog and it didnt show up? Comments are not monitored and they should come up immediately. Perhaps you are unfortunate.
Posted by Andy Myint | 09/06/2010, 13:56
Yes, sir. I have no ill-feeling about it. All I want at that time was to register my dissent against millionaire whose comment on Nyi Lynn Seck and Ritako I consider is unfair.
Posted by zizawa | 09/06/2010, 14:01
ကိုဝတုတ်တို့ လက်စွမ်းပြထားတာ ကျနော်တော့ မျက်စိမူးပြီး ပြန်သွားရပြီဗျာ၊ နောက်ဆုံးရေးတဲ့ပို့စ်တွေက အပေါ်ဆုံးရောက်လိုက်၊ အောက်ဆုံးရောက်လိုက်နဲ့ ရီးတာ ညွန်းတာကို အခြားဘလော့မှာတွေ့မှပဲ ဒီပို့စ်ကို သတိထားမိတော့တယ်။ အချိန်ယူ ဖတ်ရမှာတွေမို့ နောက်မှလာပါအုံးမယ်။ အတိုချုပ် ပြောရအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကွန်မြူနစ်သီချင်း တင်ထားတာတွေ့လို့၊ ကျနော်က ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို အစိတ်အပိုင်းအချို့ကလွဲရင် လက်ခံလို့မရသေးဘူးဗျ၊ သီအိုရီအရပဲ အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွေးအခေါ်လို့ ယူဆမိတယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 10/06/2010, 01:04
ရီတာဟာ သူ့ကို ကြိုက်မဲ့လူ မရှိလို့ နည်းနည်းဂေါက်နေ
Posted by ကိုပြဲ | 10/06/2010, 21:04
ကိုဝတုတ်ရေ၊ ဒီစာနဲ့ တိုက်ရိုက် မဆိုင်ပေမယ့် ဆက်စပ်ပြီး သတိရမိလို့ တစ်ခုမေးပါရစေ။
Posted by ပိုင် (Pi) | 11/06/2010, 02:51
မေးလက်စ၊ (တောင်းဆို လက်စနဲ့) တော့ မထူးတော့ဘူး။ ကျွန်တော် ဖတ်ချင်တာတွေကို ဆက်ပြီးတောင်းလိုက်ဦးမယ်။
Posted by ပိုင် (Pi) | 11/06/2010, 02:59
More later, sir, when I get home…. or I’ll getasack. 🙂
Posted by zizawa | 11/06/2010, 09:06
Posted by zizawa | 11/06/2010, 17:26
Posted by Nanda | 11/06/2010, 18:17
(ထင်တာပြောတာနော်။ ငယ်ထဲက သူ့ စာအုပ်တွေဆို ဖွဲ့နွဲ့ တာ များတာနဲ့အဖုံးလောက်လှန်ကြည့်ပြီးပြီးသွားတာ များလို့😛
Posted by tint oo | 11/06/2010, 18:42
. Born U Khin Maung Tint in 1930, Saya Tetkatho Phone Naing began writing when he was nineteen, and has spent most of his adult life in senior teaching and administrative roles at Myanmar’s best universities.But it is words for which this psychologist by training is famous
Posted by tint oo | 11/06/2010, 18:57
ဟား.. ဟုတ်တယ်ထင်တယ်ဗျို့. ဦးတင့်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျနော်လဲ အခုခပ်ရေးရေးပြန်မှတ်မိလာပြီ။တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ဟာ philo ကမဟုတ်ပဲ psychology ကဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြန်သတိရအောင် ထောက်ပြပေးတာကျေးဇူးပဲ။
Posted by Nanda | 11/06/2010, 19:16
ကိုနန္ဒအစဖေါ်ပေးမှ နောက်တခုသတိရတာရှိသေးတယ် ။
Posted by tint oo | 11/06/2010, 20:02
နောက်ဆို သမိုင်း အချက်အလက်တွေအတွက် ကိုတင့်ကို အားကိုးရတော့မှာဘဲ။ 
Posted by zizawa | 11/06/2010, 22:20
Posted by tint oo | 11/06/2010, 22:46
Posted by Bino | 12/06/2010, 14:19
ကိုဝတုတ်၊ ကိုနန္ဒနဲ့ ကိုတင့်ဦး
ကိုနန္ဒရေ၊ ဘာထရန်ရပ်ဆဲလ် အကြောင်း ဗမာလိုရေးတဲ့ စာတစ်အုပ်တော့ ကျွန်တော်မြင်ဖူးတယ်။ (မျက်နှာဖုံးကို ပြောတာ။ 🙂 ) စာရေးသူကတော့ ကျွန်တော်မှတ်မိတာက ဆန်းလွင် ဆိုလား။ ‘ဆန်း’ ပါတယ်။ ရပ်ဆဲလ်က နာမည်ကြီးဆိုတော့ ဗမာလို တစ်အုပ်ထက် မကရှိတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အရင်တုန်းကတော့ သူ့အကြောင်းကို စိတ်မ၀င်စားလို့ အဲဒီစာအုပ်ကို သေချာတောင် ကိုင်မကြည့်ပါဘူး။ နောက်မှ သင်္ချာက Russell’s Paradox တို့ဘာတို့နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စိတ်ဝင်စား လာလို့ ဖတ်ချင်တော့ စာအုပ်က မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီး ရှာဖတ်ရမှာ ပျင်းတာရယ်၊ ၀ီကီပီးဒီးယားကို သိပ် စိတ်မချတာရယ်ကြောင့် သိနိုင်မယ့် ဆရာတွေကို မေးကြည့်တာပါ။
Ayn Rand လည်း ဒီလိုပဲ၊ ၀ီကီကို သိပ် စိတ်မချတာကြောင့် မေးကြည့်တာပါ။ ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ဆက်စပ်ပြီး တွေးဖြစ်သွားတာကတော့ The Fountainhead ထဲက Howard Roark ရဲ့ အပြောမျိုးတွေ ကို သတိရသွားလို့ပါ။ ဆောင်းပါးရှင်တွေ ပြောချင်တာနဲ့ အဲဒီ စာအုပ်/ရုပ်ရှင်ထဲက အယူအဆတွေနဲ့ မတူဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။ ဆက်စပ်တွေးမိရုံ သက်သက်ပါ။ ကိုဝတုတ် ရေးစရာ ခေါင်းစဉ် ရုတ်တရက် ရှာမရ ဖြစ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာလေးကို သူရေးချင်လာအောင် မဲဆွယ်တာပါ။ 😀 (နောက်များ ကြုံခဲ့ရင် လက်ဖက်ရည်တိုက်ပါ့မယ်။ 😉 )
Posted by ပိုင် (Pi) | 14/06/2010, 02:30
ကဲကြည့်။ ‘သိနိုင်မယ့် ဆရာတွေကို မေးကြည့်တာပါတဲ့’ ဒို့တွေကို အထင်ကြီးပုံများ။ 
Posted by zizawa | 14/06/2010, 06:43
ကောင်းလေစွ။ 🙂 အဲဒီ ဆောင်းပါးကို စောင့်ဖတ်မယ်။
အနန္တအကြောင်းက နည်းနည်း ကြာဦးမယ်။ စာမေးပွဲတစ်ခုနဲ့ ပတ်ရှုပ်နေလို့ အခု တစ်နေ့ကို တစ်နာရီပဲ ကျောင်းစာနဲ့ မဆိုင်တဲ့စာတွေ ဖတ်တာ ရေးတာ လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရတော့ အချိန်က သိပ်မရဘူး။ ရေးရတာထက် ဖတ်ရတာကို ပိုသဘောကျတော့ ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ အဲဒီ တစ်နာရီကလည်း ကိုဝတုတ်ရဲ့ ဘလော့မှာပဲ ကုန်သွားတာ များတာပဲ။ 😀 (မုန့်ပိုပြီး ကျွေးချင်လာအောင်… :D)
Posted by ပိုင် (Pi) | 15/06/2010, 03:19
အပေါ်က မှတ်ချက်မှာ စိတ်ရောဂါမဟုတ်၊ စိတ်ပညာလို့ ရေးရမှာ၊ မှားသွားတယ်။
Posted by ပိုင် (Pi) | 14/06/2010, 02:38